Ihe ntinye ORCID na OSF, ScienceOpen na Zenodo site na AfricanArXiv - AfricArXiv
bipụtara Jo Havemann on 27th nke February 2020 27th nke February 2020
ORCID na AfricanArXiv na-agbakọ aka inyere ndị sayensị Africa aka n'ịkwalite ọrụ ha site na njirimara ndị pụrụ iche. ORCID na-akwado AfricanArXiv ma na-agba ndị ọkà mmụta sayensị Africa ume - na ndị ọkà mmụta sayensị na-abụghị ndị Afrịka na-arụ ọrụ na isiokwu Africa - ịkekọrịta nsonaazụ nyocha ha na ebe nchekwa, Open ma ọ bụ n'usoro igwe dijitalụ ndị ọzọ nwere ike ịnweta.
Dịka akụkụ nke akụrụngwa dijitalụ ndị dị mkpa maka ndị na-eme nchọpụta ịkekọrịta ozi n'ogo ụwa, ORCID na-enyere njikọ na ntụkwasị obi n'etiti ndị na-eme nchọpụta, onyinye ha na njikọta site na ịnye ihe usoroiheomume (ihe https URI nwere onu ogugu 16 nke dakọtara na ISO Standard ISO 27729) maka ndị mmadụ n'otu n'otu ga-eji aha ha mee ihe mgbe ha na-eme nchoputa, mmụta, na ihe ọhụrụ n'ụwa niile.
Gụkwuo banyere Ọdịdị nke ORCID iD.
AfricanArXiv na-enye ndị ọka mmụta sayensị Afrịka ohere iji bulie ihe odide mbụ ha, akwụkwọ ndị anabatara (bipụta akwụkwọ), na akwụkwọ ndị e bipụtara. N'ime ime nke a, anyị na-ejikọ aka na Center maka Open Science, Zenodo, na ScienceOpen, onye obula n’enye ha akwukwo nke ndi Sayensi Africa nwere ike bulite ma kesaa ihe ha choputara dika ndi otu ndi AfricaArXiv. Akwukwo ato a etinyela ORCID n'ime sistemu ha ma mee ka ndi sayensi nwee ike debanye aha, banye ma melite data oru ha na ndekọ ORCID ha.
Site na mmekota a, anyi bu n’uju anyi ume ka ndi sayensi n’uwa ndi Africa ka ha debanye aha ha nke ndi ORCID ka hapu mata, jikotara na oru ha na onyinye ha ma gosiputa mmezu ha na ulo oru nyocha, ndi n’enye ego na ndi n’ede.
Debanye aha gị ORCID iD
Already nwere ORCID iD? Gwa anyị maka ahụmịhe gị.
Kpọtụrụ anyị maka ajụjụ ọ bụla ma ọ bụ kwuo: info@africarxiv.org.
Maka inweta ihe omuma na uzo banyere ORCID gaa nkwado.orcid.org.
ORCID bụ òtù anaghị enyere aka na-enyere aka mepụta ụwa ebe ndị niile sonyere na nyocha, agụmakwụkwọ na ihe ọhụrụ na-achọpụta ihe dị iche ma jikọta ya na ntinye na njikọta ya, n'ofe ọzụzụ, ala na oge. | orcid.org
Afrịka AAAxxiv ka enyere ọsọ na imepe nchọpụta na imekọ ihe maka ndị sayensị Africa wee nyere aka chepụta ọdịnihu nke mkparịta ụka agụmakwụkwọ n'ụwa niile. Ihe odide edere ede na usoro ndi ozo n’ejiri n’elu ikpo okwu AfricanArxiv na-enye ohere nzipu na ngwa ngwa na mkparita uka banyere ihe omumu Africa.
Categories:	Open AccessMepee SayensiPublishing
Categories Họrọ Atiya Ike ikike (1) Imekota (6) AKOVKỌ-19 (25) Ihe omume (2) General (10) Akụrụngwa (1) Agwa Asusu (1) Languagedị Asụsụ (3) Mepee Mepee (16) Mepee Sayensi (12) Nyochaa Ọgbọ (2) Mbido (6) Na-ekwusara (8) Nkwukọrịta sayensị (12) Nrubeisi (5)
Akwukwo nri nke umuaka nke Africa AfricanResearch AfricaOSH ASAPbio Berlin ike ikike Center maka Open Science ogbako Covid-19 Crastina Nchọpụta Nchoputa nke nyocha Africa DIYbio Edinburgh Nchekwa nri IHECE11 IHECE2019 usoroiheomume IGDORE asụsụ asụsụ dịgasị iche ụzọ imeghe Akwụkwọ Mepee oghere Mepee Ihe Ọmụma emeghe sayensị Emepe Science Conference Mepee Sayensị Sayensị Mepee Science Hardware ORCID osc2018 mmekorita Pearl Ihuoma Osirike Nyocha ndị ọgbọ akwusila ebipụta Nkwukọrịta Sayensị ScienceOpen Odide sayensị ego oru sayensị mmadụ nkwado TCC Africa ọzụzụ ubushakashatsi
Onye otu anyi bu Vilsquare (Nigeria) eweputala ọkachamara, obere ọnụ na obere igwe elele iji nyere ụmụ akwụkwọ, ndị nkuzi na ndị nyocha aka ka na-achọ ma nwee obi ụtọ maka ịmụ sayensị mgbe ha nọ n'ụlọ n'oge mkpọchi COVID-19. GỤKWUO…
(Ebu ụzọ kọọ na Medium / Code For Africa · 5 min gụọ) Otu nha ha dakọtara niile? Kedu ka Africa ga-eji usoro nlekọta ahụike ya na-esighi ike, nnukwu ebe obibi na nnukwu akụ na ụba na-enweghị oke ahaziri ụwa maka ya GỤKWUO…
felis efficitur. libero ut dictum Aenean